नागरिक निदाएपछि जाग्छ सिंहदरबार ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
नागरिक निदाएपछि जाग्छ सिंहदरबार !
सिंहदरबार नै दुरुपयोग गर्दै बिजुली
तपाई घरमा नभएको बेला वत्ति बाल्नु हुन्छ की हुन्न ? सामान्यतयाः घरमा मान्छे नभएका बेला वत्ति बालिदैन । धेरै पढ्ने लेख्ने घरमा राती अबेरसम्म विजुली बल्छ नभए ९ साढे ९ बजेपछि सबैजसो घरमा विजुली वत्ति निभ्छ । तर, सिंहदरबारमा जब सबै मान्छे घरतिर लाग्छन् सबै मन्त्रालयहरु झिलीमिली हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणले नागरिकलाई विद्युत सञ्चित गर्न आह्वान गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय ढोका बन्द छ विजुली वत्ति खुल्ला छ ।
बिहान–बेलुका पिक आवरमा बढी बिजुली खपत हुने बस्तु नचलाउन भनेको छ । बिहान पाँचदेखि आठ र बेलुकी साढे पाँचदेखि साढे आठ बजेसम्मको ‘पिक आवर’मा वासिङ मेसिन, पानी तान्ने पम्प, आइरन, गिजर, हिटर जस्ता धेरै बिजुली खपत गर्ने उपकरण नचलाउन सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ । मंसिर १ गते प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना निकालेर यस्तो अनुरोध गरेको थियो ।
तर, नेपालको केन्द्रीय कार्यकारी कार्यालय, सिंहदरवार भने विद्युत खपतमा त्यतिनै लापरवाही देखिएको छ । नागरिकले प्राधिकरणलाई साथ दिएको छ तर सिंहदरबारले नै साथ दिएको छैन । ‘सिंहदरबारभित्रका सबै क्यान्टिमा बिहान बेलुका हिटरमा खाना पाक्छ, मन्त्रालयमा कहिल्यै पनि वत्ति निभ्दैन’ सिंहदरबारको सुरक्षामा खटिएका एक सुरक्षाकर्मीले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि कुनैपनि मन्त्रालयमा सम्वाददाता पुग्दा सबैजसो वत्ति बलिरहेका थिए । मन्त्रालयका ढोका बन्द देखिन्थ्ये, झ्याल खुल्लै थिए ।
वत्ति बलिरहेका थिए । दिउँसो पनि कर्मचारीका कोठामा वत्ति बलिरहने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने । ‘जाने बेला रात परिसकेको हुन्न, अध्यारो नभएको अवस्थामा बत्ति बालेर हिड्नुपर्ने आबश्यकता पनि छैन’ ती कर्मचारीले भने, ‘रातभरीनै विजुली किन बल्छ तपाई त्यसै अनुमान गर्नु सक्नुहुन्छ ती वत्ति दिउँसो पनि खुल्लै थिए ।
सरकारले सिंहदरवारमा सोलारबाट वत्ति बाल्ने कुरा गरेपनि त्यो अहिले सम्म लागु हुन सकेको छैन । उर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्तले भने, “योजना बनाइदैछ, बाहिर सडकमा रहेका पोलहरुमा सोलार जडान भएपनि सिंहदरवार भित्रका घरहरुमा राष्ट्रिय प्रसारणलाईनबाटनै विद्युत प्रवाह भैरहेको छ ।”
दैनिक रुपमा ४ देखि ५ मेगावाट सम्म विद्युत खपत हुने सिंहदरवार भित्र जब रात पर्छ अनि झलमल हुने गरेकोछ । विद्युत खपत कम गरौं भनेर उर्दि जारिगरेको उर्जा मन्त्रालयलाईनै रातभरपनि सिंहदरवार भित्रका घरहरुमा झलमल्ल वत्ति बलिरहँछ भन्ने जानकारीनै छैन भन्छन् सहप्रबक्ता पन्त ।
सुरक्षाको हिसावले सिंहदवार भित्र रहेका पोलहरुमा वत्ति अहोरात्र वलिरहेका हुन्छ । तर सिंहदरवार भित्र रहेका घरभित्र पनि सुरक्षाको हिसावले वत्ति वालिएका हुन् या त्यो लापरवाहिको पराकाष्टा हो ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ र उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले चलाएको विद्युत मितव्ययीता अभियान किन लागु भएन सिंहदरवार भित्र ?